Iyo yakanakisa midrange mobiles 2021 - Android Pop ▷ ➡️
Yakanakisa yepakati-renji nhare
Tsvaga zvakanakisa yepakati-renji nhare dzaunogona kutenga muna 2021Mukati mepasirese emafoni nhare pane akasiyana siyana awo. Izvi zvakapatsanurwa mumapoka zvichienderana nehunhu hwavo, vamwe vane kuita kwakakwirira nepo vamwe vasina.
Iwo mafoni anotsanangurwa mune yakaderera, yepakati uye yakakwira renji, mukati mega yega yega pane akasiyana maitiro anoita kuti foni ive nepamusoro kuita. Semuenzaniso, ekupedzisira-ekupedzisira zvishandiso zvinokurudzirwa kushandiswa kwemazuva ese sezvo ivo vasingakwanise kuita akasiyana mabasa, sekumhanya inorema mitambo yemavhidhiyo.
Kune rimwe divi, iyo yepakati-renji uye yekumusoro-kumagumo kana vaine mikana iyi, sezvandakambotaura pamberi pezasi-magumo nharembozha dzisina kuita kukuru kwavari, mutengo wavo wakaderera. Pakati iyo iri nani huwandu hwenhare, iko kwakawanda kukosha kwayo kunowedzeraMukati mematanho aya pane zvimwe zvakaita senge repamusoro avhareji, izvi zviri pakati pezviviri sezvo zvichizadzisa zvinodiwa zvese zviri zviviri.
Mid-renhare mafoni 2021
Ini ndichakupa iwe runyorwa neakanakisa mafoni efoni pakati-renji ra2021, imwe neimwe ine hunhu hwakasiyana saka hatizosarudze kuti ndechipi chakanakisa. Iwo marongedzero emidziyo haamiriri chero chinhu, iwo anongova kurudziro yemafoni efoni aunogona kuratidza nyowani.
Iyo yepakati-renji nhare ine yakanyanya kutaurwa, ine Snapdragon 765G processor, mukati mekuchengetedza kwemukati tine 128 GB. Kutaura nezvekuita, iyo Moto G ine 6 GB ye RAM iyo yatinogona kuita kugona kukuru mumitambo. Iine 5,000 mAh bhatiri ine yekuchaja nekukurumidza, iyo quad kamera, iyo yekushandisa sisitimu inouya nayo ndeye Android 10.
A smartphone iyo iri kupa yakawanda kutaura nezvayo ndeye POCO X3 kubva XiaomiVazhinji vanozvitora semhando yepamusoro-yemutengo nhare pakati pepakati. Iyo processor yainouya nayo ndeye Snapdragon 732G inoperekedzwa ne6 RAM, chishandiso chine mavhezheni maviri, imwe 64 GB uye imwe 128 GB yekuchengetedza. A 5,000 naRaama bhatiri, sarudzo hombe kana iwe uchitsvaga nhare inokupa kuita kukuru pamutengo wakaderera.
Samsung haina kuunza iyo Galaxy A71 chishandiso chine maficha akanaka kwazvo, isu tine Exynos 9611 processor. Iyo nhare ine maBhaibheri maviri nezve 6 GB ye RAM uye imwe iine 8 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetedza. Iyi huru RAM ndangariro inokupa iwe hukuru hukuru kana zvasvika pakutamba akanakisa mazita e mitambo yemafoni.
4. Xiaomi Mi Cherechedzo 10 Lite
Zvekare isu tine Xiaomi, mune ino nyaya yatinotaura nezvayo Mi Cherechedzo 10 Lite chishandiso chine 6GB ye RAM pamwe neiyo Snapdragon 730G processor. Unogona kusarudza pakati peshanduro mbiri dzekuchengetera 64 GB kana 128 GB, kana tikataura nezve kamera ine mana 64 megapixel uye pamberi pe 16 megapixel. Iyo bhatiri ine inokwana 5,260 mAh uye inokurumidza kuchaja.
Iye zvino tava ne OPPO A9 yepakati-renhare nhare iyo inongova ne4 GB ye RAM, ine Snapdragon 665 processor, asi nhare ine maBhaibheri maviri, imwe vhezheni ine 8 GB ye RAM. Kutaura nezvekuchengetera, iwo maBhaibheri maviri anokwanisa 128 GB, chimwe chinhu chinoratidza 5,000 mAh bhatiri iyo, semamwe majaira, inokurumidza kuchaja.
Imwe nhare inogona kuve yakamisikidzwa pakati peimwe yakanakisa yepakati-renji nhare dza2021, iine 6 GB ye RAM uye processor yayo. Qualcomm Snapdragon 720G inonyepedzera kuita zvakanaka mumavhidhiyo mitambo. Bhatiri rinouya neinopfuura 4,000mAh uye nekukurumidza kuchaja kwe30w, runhare runogona kugutsa zvido zvemuchina wepakati-renji.
Kune huwandu hwakawanda hwepakati-renhamba nharembozha zvine zvirevo zvakanaka, uye zvishandiso nyowani zvine basa repamusoro zvicharamba zvichibuda. Tinovimba kuti runyorwa rudiki urwu runokupa pfungwa yechinhu chauchazowana munguva pfupi iri kutevera.
Motorola, Nhare mbozha, Samsung, Xiaomi
Nhare dzakanakisa dze 3000 pesos
Chinese yekutengesa nhare ichawa nekuda kwekononavirus
TV akateedzana mitambo yemavhidhiyo
Iyo 7 yakanyanya mitambo yehondo yeApple
Kuchinja kuri kuita nhare mbozha muviri wemunhu